घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू जारोड बोवे बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
जारोद बोवेनको हाम्रो जीवनीले उनको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनमा तथ्यहरू बताउँछ।
यो उनको सफल पछाडिको वर्ष देखि सफल भएको जब सम्म आफ्नो यात्रा को एक संक्षिप्त प्रस्तुति हो। तपाईंलाई संस्मरणको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ एउटा ग्यालेरी छ जुन उहाँको बाल्यकाल प्रसिद्धिमा देखाइन्छ - सारोड बोवेनको बायोको स्पष्ट सार।
जारोड बोवेनको कथा।
हो, सबैलाई थाहा छ कि ऊ टेक्निकल dribbler को जस्तो छ जुड बेलिंगहम, एक जसले आफ्नो सन्तुलन प्रयोग गरेको छ एक अनुकूलित वेस्ट ह्याम भूमिकामा फस्टाउन। प्रशंसाको बावजुद, हामी बुझ्छौं कि केवल केही व्यक्तिहरू बोवेनको जीवन कहानी पढ्न पाउँछन्। हामीसँग यो सबै तपाईंको लागि तयार छ, र थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
जारोड बोवे बचपन कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उसले उपनाम "बोक्रस" राख्छ। जारारोड बोवेन डिसेम्बर १ 20 1996 of को २० औं दिनमा उनका बुबा साम, आमा र इ known्गल्यान्डको हेयरफोर्डशायरको लिओमिन्स्टर शहरमा चिनिने आमाको रूपमा जन्मेका थिए।
अ professional्ग्रेजी प्रोफेशनल फुटबलर तीन आमा मध्ये एक हो (दुई छोरा र एक छोरी) उनको आमा बुबा को बीच मिलनबाट जन्मेका - एक नजर-जस्तै बुबा र एक सुन्दर आमा।
जारोड बोवेनका अभिभावकलाई भेट्नुहोस्।
साम बोवेनको छोरा लिओमिन्स्टरमा हुर्किए, जुन हेयरफोर्डबाट १२ किलोमिटर टाढा छ। सानो जरारोड केवल तीन वर्षको थियो जब उसले फुटबल खेल्न शुरू गर्‍यो। त्यसबेला, उनी टिभीमा फुटबल हेर्न र त्यसपछि आफ्नो परिवार बगैंचामा गएका केही चालहरू उत्पादन गर्न प्रयोग गरेका थिए। सत्य यो हो कि जारोडको सुरुवातदेखि जीवन फुटबल वा केहि पनि छैन।
के तपाईंले उसको परिवारको घरको बगैंचामाको यो फोटो देख्नुभयो?
Jarrod बोवे परिवार पृष्ठभूमि:
त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन अगाडिको अन्तर्वार्ताबाट घटाउन सकिन्छ। त्यस्तै एउटा चीज यो हो कि उसको बाल्यकाल आरामदायी थियो। यद्यपि, उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि फुटबल भन्दा रग्बी थियो र उसका आमाबाबुसँग फुटबल अभ्यास गर्ने अनुमति छैन। उसको खुसी र उनलाई एक मध्यम-वर्गको लालनपालनको सब भन्दा राम्रो दिन सबै साम र उनकी श्रीमतीले हेरचाह गरे।
जारोड बोवे परिवार मूल:
के तपाइँ सचेत हुनुहुन्छ कि लिओमिन्स्टर जन्मको शहर वेल्सको नजिक छ? थप उत्सुकताका साथ, उनका आमाबुवाले उनलाई पहिलो नाम बोवेन राखेका थिए, जुन वेल्श हो। साइमरु लिंकको बाबजुद, जारोड बोवेनको पारिवारिक जरा अंग्रेजी मार्फत र माध्यमबाट हुन्छ।
नक्शा जारोड बोवेनको जन्म शहरको स्थान देखाउँदै।
जाररोड बोवेन फुटबल कहानी:
त्यतिबेलाको फुटबल उत्साही १० बर्षको उमेरमा उनी हेयरफोर्ड युनाइटेडमा स्कुलका एक विद्यार्थीको रूपमा भर्ना भए। के तपाईंलाई थाहा थियो?… एस्टन भिल्लासँग उसको असफल परीक्षणहरू पछि नामांकन आयो। क्लबले उहाँमा विश्वास गरेन - हुनसक्छ Jarrod आफ्नो चश्मा संग उनीहरूको प्रकारको फुटबलर जस्तो देखिँदैन।
एस्टन भिल्लाको अस्वीकृति पछि हंसमुख जारोड बोवेन।
प्रारम्भिक क्यारियर कहानी:
हेरफोर्ड युनाइटेडसँग आफ्नो क्यारियरको चरम सीमामा, उहाँ क्लबले फेरि जारी गर्नुभयो। रिलिजले बोवेनको प्रदर्शनसँग केही गर्न सकेन तर क्लबको श्रेणीमा व्यवस्थापकीय अस्थिरता।
यसैले बोवेन परीक्षणको लागि कार्डिफ शहर गए, यो घटनाले उनको परिवारलाई अर्को बिगार्‍यो। सत्य हो, उसले अर्को अस्वीकृति भोग्यो। अनुभवको बारेमा बोल्दै, उनले एक पटक भने;
“मेरो बुवाले कार्डिफ शहरबाट मेरो अस्वीकृतिको कल प्राप्त गर्नुभयो र यसले मलाई रोयो। मलाई थाहा थिएन मेरो भविष्यको के हुन्छ।
म स्कूलमा वास्तवमै राम्रो थिएन किनकि मैले आशा गरेको सबै एक फुटबलर बन्थे। ”
जारारोड बोवेन बायो - प्रसिद्धीको लागि मार्ग:
भाग्यवस, बोक्रसका लागि, हेयरफोर्डले फेरि सुरु गर्‍यो, र उनीहरूले उनको सेवाहरूको लागि अनुरोध गरिरहेछन् - यो घटनाले उनको परिवारलाई आनन्दित तुल्यायो। २०१ determined मा एक निर्धारण जारोड बुल्सको पहिलो टीममा प्रवेश गरे जसले तिनीहरूलाई उन्मुक्तिबाट जोगिन र व्यक्तिगत सम्मान समेत जित्न मद्दत गर्‍यो।
हेयरफोर्डको श्रेणीको माध्यमबाट उसको बृद्धि हुँदा स्ट्राइकर कस्तो देखिन्थ्यो हेर्नुहोस्।
यद्यपि क्लब फेरि अर्को वित्तीय स in्कटमा डुबेको छ जसको कारण फुटबलबाट यसलाई बाहिर निकालियो। बोवेनको लागि भाग्यशाली, उहाँ पहिले नै व्यावसायिक, विकास थियो जसले २०१ 2014 मा हल सिटीमा उनको स्थानान्तरण सिमलेस गरे।
यो यार्कशायरमा आधारित क्लबमा बोवेनले आफूलाई अगाडि बढाए। उसले डिसेम्बर २०१ 2018 मा महिनाको EFL च्याम्पियनशिप प्लेयर अफ द माइनर क्लोच गरेर क्लबको साथ बलियो भयो। प्लेयर अफ द इयर र हिल सिटी सपोर्टर्स प्लेयर अफ द ईयर पुरस्कार २०१ 2019 मे २०१ in मा।
सबै चैम्पियनशिप पुरस्कारहरू कसले पाइरहेका थिए हेर्नुहोस्।
Jarrod बोवेन जीवनी - प्रख्यात कथा उठ्नुहोस्:
२०२० जनवरीमा वेस्ट ह्याम आफ्नो हस्ताक्षर खोज्न आउँदा सबैको ओठमा एउटा प्रश्न थियो। उसले सामना गर्ने थियो डेभिड मोयेस'फुटबलको शैली? त्यस समयमा रिलीगेशनका डरहरू व्याप्त थिए, र प्रबन्धकलाई आफ्नो स्ट्राइकरहरू रक्षाको पहिलो लाइन हुनुपर्छ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने धेरैलाई अपर्याप्त हुन योग्यको क्षमतामा विश्वास थिएन।
यो प्रश्न begs, वेस्ट ह्यामको जारोड बोवेनले डेविड मोइजको प्रणालीमा कसरी समायोजन गरे? स्ट्राइकरले च्याम्पियनशिपमा फ्रि-स्कोरिंग फारमको मजा लिन्थ्यो यद्यपि उनले हेमर्सलाई प्रिमियर लिगमा राख्नको लागि आफैलाई एक रक्षात्मक अनुशासनमा ढाल्न बाध्य भएको देखे। तसर्थ, उसले निस्वार्थ भूमिकाका लागि धेरै ड्राबिलिंगको त्याग गर्‍यो र हथौड़ोंले विद्रोहबाट टाढा रह्यो। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
जारोड बोवेको प्रेमिका को हो?
तपाईले हाम्रो केटाको फोटो एक महिलासँग देख्न सक्नुहुन्न, न त उनले आफ्नो जीवनमा विशेष व्यक्तिको बारेमा केहि भनेका छन। जे होस्, उहाँ एक प्रेमिका पाउन पर्याप्त उमेरको छ।
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उसले लिगमा आफ्नो व्यापार चलाउँछ जसको प्रशंसकहरूले प्रेमिकाको साथ ताराहरूमा प्रीमियम राख्छन्। तसर्थ, यो केवल समयको कुरा हुनेछ उसले आफ्नो लागि एक सुरक्षित गर्नु अघि।
जब तपाईंले उसकी प्रेमिकाको बारेमा सोध्नुहुन्छ तब इशारा जारोड बोवेन बनाउँदछ।
जारोड बोवे पारिवारिक जीवन:
हाम्रो केटा - सबै मानिस जस्तो - एक महिलाबाट जन्मेको थियो। ऊसँग बुबाहरू र एक नजिकको किथ र रिजको एक ठूलो सेट संग बुबा छ। तिनीहरू सामूहिक रूपमा उनको परिवार को रूप मा उल्लेख छ। हामी तपाइँलाई जारोद बोवेनका आमाबुवाको बारेमा तथ्यहरू दिन्छौं। साथै, हामी यहाँ उसका भाइबहिनीहरू र आफन्तहरूको बारेमा तथ्यहरूको रूपरेखा लिनेछौं।
जारोड बोवे फादरको बारेमा:
साम फुटबलरका बुबा हुनुहुन्छ। उहाँ एक पेशेवर फुटबल स्टार पनि हुनुहुन्थ्यो तर कम महत्वपूर्ण क्यारियर थियो। तर बोवेनले उनलाई उच्च सम्मानमा राख्छन्। स्ट्राइकरको भर्खरको अन्तर्वार्ता - शीर्षक Harry Redknapp मेरो बुबालाई वेस्ट ह्यामको लागि हस्ताक्षर गर्न चाहनुहुन्थ्यो! - नन-लीग र्यान्कमा सामले गरेको शोषणले उनलाई वेस्ट ह्यामको रडारमा कसरी पप गर्यो भन्ने कुराको मात्रा बोल्छ तर उसले हस्ताक्षर गरेन। भाग्यवस, बोवेन सामको सपनामा बाँचिरहेका छन् र खेलकुद बुबा उनी लन्डन स्टेडियममा प्रदर्शन गर्न पाउँदा खुसी छन्।
जरारोड बोवेन आमाको बारेमा:
साम जस्तै, अगाडिको आमाले आफ्नो बाल्यकालको जीवन र उदयमा ठूलो प्रभाव पार्दछ। उनी पूर्वी श्री लन्डनमा आफ्नो छोराको प्रगति ट्रयाक राख्न र खेलकुदमा पारिवारिक चासो जगाइराख्न सुनिश्चित गर्न आफ्नो पतिसँग मिल्छिन्।
Jarrod बोवेन आफ्नो पूर्व फुटबल बुबा र मीठी आमा संग।
जारोड बोवे भाई बहनहरूको बारेमा:
के तपाई सचेत हुनुहुन्छ कि अ forward्ग्रेजी फर्वार्डको एक भाइ हैरी भनिन्छ? उनको एक कान्छी बहिनी छ जसको नाम केहि मिठो हुनुपर्दछ। भाइबहिनीहरू उनी र उनी पूर्व ईस्ट लन्डनमा गर्ने सबै कुरामा गर्व गर्नुपर्दछ।
जारोड बोवे आफ्ना भाइबहिनीहरूसँग - एक भाइ हैरी र बहिनी भनिन्छ।
जारोड बोवे रिश्तेदारहरूको बारेमा:
अ man's्ग्रेजी व्यक्तिको निकट पारिवारिक जीवनबाट टाढा, उसको पुर्खाको रेकर्डहरू छैन। हाम्रो सम्मानित दर्शकहरु जस्तै हामी यो कुरा जान्न उत्सुक छौं कि बोक्रसका मातृ-आमा र बुवा हजुरआमा उहाँ जस्ता फुटबल प्रतिभाशाली थिए कि थिएनन्।
के उनका काका र काकीहरू खेल प्रेम गर्छन्? त्यसोभए ऊसँग चचेरो भाईले बनाएको छालहरू ठीक ठाउँमा हुनुपर्दछ। हुनसक्छ हो वा होईन। त्यहाँ धेरै उत्सुकताहरू छन् जुन हामी सन्तुष्ट पार्न चाहन्छौं, यद्यपि हामी उनलाई भतिजा र भतिजी चिन्न चाँडो छैनौं।
जारोड बोवे व्यक्तिगत जीवन:
परिवर्तन तिनीहरू भन्छन् स्थिर छ, तर हाम्रो केटा एक अपवाद साबित भएको छ। बोवेन छन - ब्यवहारिक हिसाबले - जो उनी आफ्नो दिनदेखि सम्मेलन फुटबलमा माथिको उडानमा रहन्छन्। ऊ नम्र छ, तल पृथ्वीमा र बस्ने ठाउँ हो। उहाँ मूल्यमा परवाह नगरी सधैं अगाडि बढ्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ, एक मानसिकता जुन उनको अविश्वसनीय कार्यलाई टेक्निकमा प्रतिबिम्बित गर्दछ।
के तपाई सचेत हुनुहुन्छ? जारोड बोवेन ट्र्याक्टरको टायरहरू खेतमा तान्न ठूला अपका लागि अगाडि सफल हुन? यस्तो कति अगाडि सफलता चाहान्छ र केहि मा रोक्न को लागी उनको खेल को शीर्ष मा हुन छ।
यद्यपि हामीले उसलाई फुटबल बाहिरका रमाइलोमा पक्रेनौं, उहाँ हामीलाई मन पराउने जो कसैले संगीत मन पराउनुहुन्छ। पौंडी खेल्न र साथीहरूसँगै बस्नु उसको शौकको एक हिस्सा हुनुपर्छ। साथै, छुट्टी उसको रुचिहरूको सूचीमा हुनुपर्दछ।
ऊ सधैं आफ्ना साथीहरूलाई नजिक राख्छ।
Jarrod बोवे जीवन शैली:
अगाडि शीर्ष उडान फुटबल गर्न नयाँ छ त्यस्तै उसको worth मिलियन युरोको कुल सम्पत्ति! त्यहाँ उसले £4को वार्षिक तलब संग गर्न सक्ने धेरै छैन। यसले वर्णन गर्दछ किन उसको इन्स्टाग्राम फोटोहरू चम्किलो जीवनशैलीबाट वञ्चित छन् जुन विदेशी कारहरूमा यात्रा गर्दै र ठूला घरहरूमा लुगिंगद्वारा चित्रण गरिएको थियो।
जारोड बोवे अनटोल्ड तथ्यहरू:
यस लेखलाई खेलाडीको बाल्यकाल कहानी र जीवनीमा समेट्नको लागि, यहाँ उहाँबारे केही सत्य छन्।
तथ्य # १- वेतन र प्रति सेकेन्ड कमाई:
प्रति वर्ष £ 5,000,000
प्रति महिना £ 416,667
प्रति हप्ता £ 96,006
प्रति दिन £ 13,715
प्रति घण्टा £ 571
प्रति मिनेट £ 9.52
प्रति सेकेन्ड £ 0.16
तपाईंले जारारोड बोवेन हेर्न शुरू गर्नुभयो बायो, यो उसले कमाएको हो।
तथ्य # १- धर्म:
फुटबलरहरू विश्वासको मामिलामा आफ्नो स्वभावको बारेमा आमालाई राख्नुमा ठूला हुन्छन्। तसर्थ, यो पत्ता लगाउन गाह्रो छ कि तिनीहरू विश्वासीहरू हुन् कि छैनन्। जरारोड बोवेनको मामलामा हामी विश्वस्त छौं कि उहाँ एक विश्वासी हुनुहुन्छ र सम्भवतः एक जना मसीही हुनुहुन्छ।
तथ्य # १- फिफा २०२० रेटिंग्स:
यो याद गर्नु अपमानजनक छ कि फिफाले एक तारालाई कम रेटिंग दियो जुन आक्रमणमा अनावश्यक छ। जस्तै जो रोन्डन, हामी कसरी यो तथ्यलाई मेल खान्छौं कि यस्तो अद्भुत गुणको साथ अगाडि 77 84 को सम्भावनाको साथ XNUMX XNUMX को समग्र रेटिंग छ? यो केवल रलिगेशनबाट क्लबहरू बचाउनको लागि प्रसिद्ध फुटबलरको लागि जोडिएन।
उदाउँदो ताराको तथ्या .्क हेर्नुहोस्
जारारोड बोवेनको बाल्यकालको कहानी र जीवनीमा यस जानकारीमूलक अंश पढ्नको लागि धन्यबाद। हामी आशा गर्दछौं कि यसले तपाईंलाई विश्वास गर्नको लागि सबैभन्दा अँध्यारो क्षणहरू बिहान हुनुभन्दा ठीक अघि नै प्रेरित गरेको छ। जसरी बोवेनले सोचे कि उनले सबै आशाहरू गुमाए सम्म हियरफोर्डलाई सम्झेर बोलाए र उनलाई जीवन परिवर्तन गर्ने सम्झौता दिए।
यो अब हामी अगाडी मा आफ्ना बुबा क्यारियर को समर्थन विचलित समर्थन को सराहना गर्न behooves। उहाँमा उनीहरूको विश्वास कहिल्यै ढलपल भएन, यस्तो देखिन्छ कि बोवेको फुटबलमा भविष्य छैन। आज, उहाँलाई पक्का छ कि कसरी थाहा छ खेल ओछ्यानमा राख्न र उनको परिवारका सदस्यहरु अंग्रेजी मा डब भएको देखेर गर्व गर्दछन् Arjen Robben.
Lifebogger मा, हामी सटीकता र निष्पक्षता संग बचपन कथाहरू र जीवनी तथ्या deliver्क वितरित मा गर्व गर्दछौं। यदि तपाईं केहि पनि देख्नुहुन्छ जुन ठीक देखिँदैन, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा तल सन्देश छोड्नुहोस्।
तपाईंको जीवनी ईन्क्वायरीहरूमा द्रुत उत्तरहरूको लागि, हाम्रो तालिका प्रयोग गर्नुहोस् किनकि यसले जारोड बोवेनको प्रोफाइललाई सारांशमा प्रस्तुत गर्दछ।
पूर्ण नामहरू: जारोड बोवेन।
उमेर: २ years बर्ष, ११ महिना
जन्म मिति: २० दिसंबर १ 20।।
जन्मस्थान: हेयरफोर्डशायर, इ England्ग्ल्यान्डको लिओमिन्स्टर शहर।
फिटमा उचाई: Fe फीट, १० ईन्चहरू।
सेमी मा उचाई: 175.26।
खेल्ने स्थिति: स्ट्राइकर
अभिभावक: साम (बुबा)
Siblings: ह्यारी (भाई), सानो बहिनी।
प्रेमिका: N / A
रुचि: संगीत सुन्दै। पौडी खेल्ने र परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय बिताउने।
नेट मूल्य: M मिलियन यूरो।
इसा डाइप बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
माइकल एंटोनियो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
डेनल राइस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य